Shaxda Kooxdii Ajaanibka Ahayd Ee Abid Ugu Fiicnayd Man United Oo Lasoo Saaray - Gool24.Net
Shaxda Kooxdii Ajaanibka Ahayd Ee Abid Ugu Fiicnayd Man United Oo Lasoo Saaray
Manchester United waxay nasiib u yeelatay in xiddigihii ugu wanaagsanaa Premier League ay garoonkeeda Old Trafford ka ciyaaraan, isla markaana ay soddonkii sannadood ee ugu dambeeyey siiyaan guulaha ugu badan ee ay koox Ingiriis ah gaadho.
Ciyaartoyda sida Eric Cantona, Jaap Stam iyo Cristiano Ronaldo ayaa ka mid ahaa laacibiinta aanay jamaahiirta Manchester United illoobi doonin taariikhda ee aan u dhalanin waddanka UK, kuwaas oo ugu horreeya safka koox laga sameeyey ciyaaryahannada ajaanibka ah ee Red Devils ay lasoo saxeexatay.
Wargeyska The Sun ayaa waxa uu soo bandhigay koox laga sameeyey ciyaartoydii Man United ay kasoo iibsatay dibedda Boqortooyada Britain ee aan Britishka ahayn, kuwaas oo ahaa dhab ahaan laacibiinta ku hoggaamiyey guulaha ay maanta tirsato ee cahdigii Sir Axlex Ferguson.
Goolhayaha lagu tilmaamo inuu yahay midka ugu wanaagsanaa taariikhda Manchester United ee Peter Schmeichel, isaga oo ka sarreeya David de Gea iyo Edwin van der Sar qiimaynta wax-qabadka.
Cristiano Ronaldo oo reer Portugal ah iyo Eric Cantona oo Faransiis ah ayaa hoggaaminaya safka weerarka, sidoo kalena waxa ku jira Van Persie, Ruud van Nistelrooy iyo Pogba.
Halkan kaga bogo safka kooxda oo dhamaystiran: